1 Ny teny hoe « tantaran’i Madagasikara»
2 Ny Fiavian'ny Anarana hoe : Madagasikara
3 Ny Fahavazimba (400 - 1500)
4 Ny nahalalana an'i Madagasikara voalohany ka hatramin'ny Fanjakana Hova (1300)
5 Ireo Tatsambo sy ny Fanjakana Sakalava (1500 - 1700)
6 Ny Mpanjaka Malagasy (1700 - 1896)
7 Ny Fanjanahan-tany (1896 - 1960)
8 Ny Repoblika Voalohany (1960 - 1973)
9 Ny Repoblika Faharoa (1973 - 1991)
10 Ny Repoblika Fahatelo (1991 - 2014)
Ny teny hoe « tantaran’i Madagasikara»[hanova | hanova ny fango]
Ny Fiavian'ny Anarana hoe : Madagasikara[hanova | hanova ny fango]
I Marco Polo dia nanome ny anarana hoe: Madeigascar na. Mo gelaiso: nafangarony tamin'ny tanana any Somalia Mogadiscio. Sarintany eoropeana misy an'i Madagasikara ny toerany eo atsinanan'i Afrika. Ny portogey nanome ny anarana "São Lourenço" (Saint Laurent), "l'île dauphine" hoy ny Frantsay. Nandroso ny taona, nipoitra ny hoe Madagasikaraka ny mponina tao Faradofay ("Fort Dauphin") dia natao hoe "Madagascarois" na "Madécasses" (izay nijanona tamin'ny teny alemàna ary nivadika Madegassisch). Mpandinika tantara no milaza fa ny teny madekasy dia avy amin'ny hoe Madagasy na Madegasy, teny malaiziana (Malaizia) na afrikana navadika hoe Malagasy. Ireo anglisy taty aoriana no nanaiky an'i Radama Voalohany ho mpanjakan'i Madagasikara.
Araka ny fikarohana natao dia fahadisoana nataon'ireo eoropeanina nanaraka ny feo heno ary voasoratr'ingahy Marco Polo, efa voalazan'ny namana etsy ambony io, no nahataonga ny anaran'i Madagasikara. Ao amin'ny bokiny mitondra ny lohateny hoe Milione, voadika amin'ny fiteny italiana ankehitriny dia marihiny fa misy fanjakana roa lehibe matanjaka any amin'ireo nosy roa ao atsinana'i Afrika dia i Madaghosho (Madeigascar na Mogelascio) sy i Zanzibar (Zanguebar); arak'izany ny teny hoe: "Madaghosh" izay ampiasain'i Marco Polo eto dia azo heverina fa mifandrika amin'ny teny hindi indianina hoe: "mad'hos" ; koa noho izy nihaino fotsiny nefa tsy tena mahay ny teny hindi dia izay nahazoany azy no nanoratany azy ; koa azo heverina fa io teny hindi (izay nanaraka ny sivilizasiona Malay tamin'izany) io no mety ho fototry ny teny tena mahalaza ny anarana hoe Madagasikara sy Malagasy, satria miovaova ny fanononana ny teny araka ny fotoana sy ny tantara, ary tsy mitsaha-mivoatra izy.
Ny teny hindi mad'hos moa dia midika hoe: ravoravo, mifalihavanja, velon'aina fa feno fanatenana; tsy lavitra an'izany ny fomban'ny Malagasy ary mahasarika vahiny maro, koa mety ho notondroin'ireto Indianina ho tan'ireo olona falifaly na ravoravo ny Nosintsika. Raha dinihina izany dia ireo Indianina tonga taty amintsika voalohany no nanome io anarana io; ary raha ny fiovan'ny feo no zohina dia toy izao no azo andinihana io teny io: mad'hos mety ho voatonona ho mad'ghos, na mal'hos, na mal'ghos, saingy ny hoe "Madeigascar" voalazan'i Marco Polo dia noho izy nanao lalamahitsy fotsiny, ary nandahatra azy mora fotsiny amin'ny hoe "Zanguebar" na Zanzibar (marihina fa amin'ny fandrasan-teny ny fiovana dia ny "h" lasa "g"; ny "d" miova ho "l", koa azo halalinina akaiky izany).
Toy izao kosa ny hevitr'i Xhi sy M'aa, izay filôzôfy malagasy anisan'ny fanta-daza: Ny fanandroana malagasy dia mampiasa anaram-bolana, toy ny 'fanandroana' rehetra hita eran-tany. Alahamady, Adaoro, Adizaoza, Asorotany, Alahasaty, Asombola, Adimizana, Alakarabo, Alakaosy, Adijady, Adalo, Alohotsy. Amin'ireo anaram-bolana ireo dia ny volana Alahamady, Alakaosy ary Alakarabo no nivoahan'ny teny hoe Mady, Kaosy, Kara ka ireo hono no nahatonga ilay hoe Madagasikara rehefa atambatra.
-Avy amin'ny Vondrona MANANKASINTSARA, navoakan'Andriamatoa NOMENJANAHARY Rado fantatra amin'ny solon'anarana hoe(RADO AMPINGA)dia toy izao:
Ny teny Malagasy dia teny miaina noho izany dia maro ny fiovana mitranga isaky ny vanim-potoana samihafa. Ao ny miha tsara ao ny miha simba ao ny miova tanteraka mihitsy ny heviny
Antsamodady : ny Antsamotady dia fitaovam-piadiana na hoe "pilotra", kanefa raha ny tena izy dia "antsamatady" (an-samaka-tady).
Amparafaravola : Anaran-tanana io. Raha ny tokony ho izy dia amparafara volo (volontsangana, bararata), teny roa mifanalavitra be ireo ( vola, volo).
Foana : ilazana zavatra tsy misy na zavatra poakaty tany ampiandohana, ankehitriny anefa zary lasa fiteny amin'ny fiverimberenana sy hamaroana ny teny hoe foana («Tiako foana ianao»)… Izany dia nalaina avy amin'ny fitenin-jaza, hany ka lasa teny roa mifanohitra hevitra no hiafarany.
Maro be tsy tambo isaina ny teny toy izany, fa raha ny hoe Malagasy dia azo heverina fa fiovana avy amin'ny Manankasy. Dia toy izany ihany koa ny hoe Madagasikara → Manankasintsara.
Ny teny hoe Hasina aloha dia Hasy ihany, araka ny tenim-paritra.
Iaraha miaky ny fanabontoloana sy fanimbana kolontsaina nentin’ireo mpanjanaka teto amin'ny valam-parihy, manginy fotsiny ireo fanambaniana sy fanapotehana ny tenindrazana. Ny iraisan’ny rehetra na ny mpanjanaka izany na ny voazanaka dia eo amin’ny lafiny filalaovana sy fanovàna teny, fiteny, dia ny fandikana na fampifandraisana ny feo, mba hifandraika amin’ny tenin-drazany ("calque phonétique"). Raha tsy hilaza afa-tsy ny: screw driver → sokodrevo ("tournevis"), Amin’io teny Sokodrevo io anefa dia tsy very mihintsy ireo hevitra roa: sokotra + revo, izay marihina fa ( calque phonétique) avy amin'ny teny Angalisy.
Ny Fahavazimba (400 - 1500)[hanova | hanova ny fango]
Araka ny volazan'i L. Ramaroson ao amin'ny Teto an'ivon'ny Riaka dia efa nisy olona nonina ihany teto Madagasikara tany amin'ny roarivo taona talohan'i Jesoa Kristy tany ho any, saingy mbola vitsy dia vitsy ny mponina teto tamin'izany. Ny vazimba no voalaza fa nonina teto amintsika voalohany indrindra, dia ny taranak'ireo olona ireo izany no tondroina amin'io anarana io voalohany, fa voatondro ho vazimba koa ireo aziatika na indonezianina efa nanomboka niori-mponenana teto Madagasikara hatramin'ny taonjato Voalohany taorian'i Jesoa Kristy.
Ho fanatevenana izay efa voalaza teo ambony dia nantsoina hoe vazimba ireo vazimba noho izy ireo resy an'ady tamin'ny fanafihana nataon'ireo mpiavy tonga taty aoriana (izay azo lazaina ho ireo razamben'ny fanjakana Merina). Azo rasaina toy izao ny teny hoe vazimba (Voazimba), izany hoe very hasina satria resy an'ady. Niova moa ny teny manaraka ny andro ka azo heverina araka izany fa avy amin'ny teny malagasy hoe voazimba ny teny hoe vazimba. Tsy marina araka izany ny filazana hoe olona fonentana ny vazimba na izay fomba hafa anoritsoritana azy amin'ny endrika fanaratsiana. Noho izy ireo very hasina no nahatonga ny olona manaratsy ny vazimba toy izany satria heverina ho toy ny olona ambany saranga ny olona vazimba na voazimba.
Hatramin'ny taonjato voalohany tao.J.K dia tsy nazava loatra ny tena tantaran'i Madagasikara. Tsisy nahitana taratra fa nisy karazan'olombelona niaina talohan'io fotoana io, ka nahatonga ny fieritreretana fa tsy nanana fiandohan-tantara ity nosy ity. P. Laforgue, izay mpandalina tantara dia nanambara fa "toe-javatra hafa kely izany, nefa dia izay no zavamisy".
Na ny nanazavana ny fiavian'ireo mponina sy ny fotoana tena nipoirany aza dia tsy voalaza mazava. Maro ny sosokevitra naroso, isan'izany ny an'i G. Grandidier, mpikaroka, nilazana fa ny Malagasy dia Indo-melaniziana, nisy nifandraisany tamin'ny olona avy tao Papoazia. Ny Governora Deschamps kosa dia nihevitra fa nisy ireo tansambo izay niatrika ny ranomasimbe indiana, ka izany no niheverany fa ny mponina indoneziana dia niala avy tany India sy ny sisin'i Afrika izay toerana nakan'izy ireo ny mainty hoditra. Rehefa izany dia nitohy tamin'ny sisin'i Afrika ny fifanakalozana mandra-pahatongan'ny fotoana nampatanjaka ny arabo teo amin'ny fifamoivoizana an-dranomasina.
Araka ny hevitr'i Deschamps noho izany, ny mponina malagasy hatramin'ny fahagola dia fifangaroan'ny mponina indoneziana sy afrikana, na eo amin'ny fiteniny na eo amin'ny fomba amam-panao, ary niampy tsikelikely ireo maleziana, indò, arabo, ary eoropeana.
Maro ireo tantsambo nandalo ny morontsirak'i Madagasikara; tao ny arabo, i Marco Polo, i Vasco de Gama, ireo portogezy Pereira sy d'Acunha, de Gonneville,... fa tsy voalaza mazava na tena niantsona tamin'ny tany malagasy izy ireo na tsia.
Ireo Tatsambo sy ny Fanjakana Sakalava (1500 - 1700)[hanova | hanova ny fango]
Ny Mpanjaka Malagasy (1700 - 1896)[hanova | hanova ny fango]
8-Andrianampoinimerina|ANDRIANAMPOINIMERINA (1787->1810) Andianampoinimerina no andriandehibe Hova nitondra ny anarana hoe "Mpanjakan'i Madagasikara".
Ny nampalaza azy dia ny fahaizany nandrindra sy nandamina ary nanitatra ny fanjakany, "Ny ranomasina no valamparihiko" no teny filamatra nentina nanjaka ary fandriampahalemana no niainan'ireo fanjakany.
Niamboho tamin'ny faha-dimy amby enimpolo taonany Andrianampoinimerina tamin'ny 1810.
9-Radama I ((1810->1828) Valo ambin'ny folo taona Ilaidama raha nandimby an'Andrianampoinimerina tamin'ny taona 1810, ary Radama I no anarana nentiny.
Nandritra ny taonjato XIX dia nisy fifandrafiana teo amin'ny fitondrana frantsay sy ny mpitondra anglisy tao amin'ny nosy Maorisy izay nihevitra an'i Madagasikaraho eo ambany fifehezany. Voasolon'ny Angletera noho izany ny toerana notazonin'i Frantsa tao Madagasikara, ary afaka nifandray ara-pihavanana sy ara-diplomatika tamin'i Radama I izy ireo.
Ny fanjakan'i Radama I, noho izany, dia voamariky ny fananan'ny Anglisy fahefana tanteraka.
Nandritra ny fiandrianany no nanitaran'i Radama ny fanjakany hatrany Toamasina, Mahajanga ary Taolagnaro. Nofoanany ny fanandevozana, natsangany ny tafika, ny fitsarana ambony sy ny mpitsara fara-tampony. Nofoanany koa ny fanamelohana ho faty, fa nosoloiny ny fonja. Natsangany ny sekoly, ny fanotam-boky, ary ny tenan'ny Mpanjaka mihitsy no manara-maso akaiky ny taozava-baventy sasantsasany.
10-Ranavalona I (1828->1861) Ramavo, vadin'ny Mpanjaka niamboho, no nandimby an'i Radama I araka ny lalànan'ny fifandimbiasana eo amin'ny fiandrianana, ka Ranavalona I no anarana nentiny.
Nanjaka tanteraka ny antokon'ny hova taorian'ny niambohon'ilay Mpanjaka tia fahalalahana, ary dia nanjaka tokoa ny habibiana izay tsy mbola fahita tao Madagasikara tamin'izany. Namoaka karazana lalàna izay nanageja tokoa ny vahoakany ny Mpanjakavavy. Ny habibiana, ny finoanoam-poana ary ny fankahalana ny vahiny no tena nanamarika ny fotoana nanjakany. Noroahiny ireo vahiny ary nobodoiny ny tany sy fananan'izy ireo ; nanamparany ny fahefany ny protestanta ; nofoanany ny finoana kristiana, noheverina ho fahavalon'ny fanjakana sy mpamadika ireo misionera sy ny mpanaraka azy. Tamin'ny taona 1849 no tena nafana ny fanenjehana ireo kristiana izay nodorana velona, notapahan-doha na navarina avy teny amin'ny havoana.
Frantsay vitsy dia vitsy no mba navahan'ny Mpanjakavavy tamin'izany, ka isan'ireo i Jean Laborde, izay olona nitokisany tokoa nandritra ny 25 taona. Izy no nanangana ozinina maro, sy nampiditra indostria maro tao amin'ny firenena ary izy koa no vy nahitana ny Rovan'i Manjakamiadana, izay nilana olona an'arivorivony tamin'ny nananganana azy.
I Jean Laborde no naharesy lahatra ny Mpanjakavavy ka nampalefaka azy tamin'ny vahiny. Nanomboka nisokatra ny fifanakalozana ara-barotra amin'ny tany ivelany.
11-Radama II (1861->1863) Rakoto, zanakalahin'i Ranavalona I, no nandimby an-dreniny, ka naka ny anarana Radama II. Teo dia làlam-piainana vaovao,hafa tokoa noho ny tamin'ny teo aloha no niainan'ny Nosy, satria raha lozabe sy tsy mba nandefitra ny Mpanjakavavy Ranavalona I, ity zanany nandimby azy kosa dia tena olon'ny fo sy malalaka. Ny tena mba faniriany dia ny hanamaivana ny fahorian'ny vahoakany sy ny hahasambatra azy.
Toa ny niaina fitsanganana tamin'ny maty ny vahoaka tamin'izany, vahoaka afa-patorana ka nahazo fahafahana. Nandritra ny fotoana fohy nanjakany, dia nomen'i Radama II fahafahana ny andevo rehetra, nasaina natsahatra ny fanenjehana ny kristiana (protestanta) ary nomeny vahana ny fananganana ny eglizy katolika romana, nofoanany ny haban-tseranana, ary nomeny alalana honina ny vahiny.
Noho izy tsy mba nanafina ny fitiavany an'i Frantsa sy ny Andriandehibeny, dia nangataka tamin'i Napoléon III izy hanendry solontenam-panjakana frantsay ao Antananarivo. I Jean Laborde, namana akaiky ny Mpanjaka no voatendry tamin'izany, ary izy kosa dia nanendry an'i Lambert ho lehiben'ny Masoivohon'i Madagasikara tao Parisy.
Kanefa ny hatsaram-panahin'ny Mpanjaka dia lasa nivadika ho fahalemena ihany koa. Nisy antokon'olona mpankahala azy nitsangana malaky, ka Rabodo vadiny indrindra no lohany tamin'izany. Notoheriny ny fitondran'ny vadiny, ka nikonokonona ny hanjera ny fanjakany izy. Io antoko mankahala an'i Radama II io no nararaotin'ny Anglisy niaraha-dia mba hahafahany mampahazo laka ny politika viktoriana.
Ellis, misionera anglisy, no isan'ny nandranitra ny toe-draharaha raha nanaparitaka fa tadiavin'ny Frantsay alaina an-keriny ny tany Malagasy ka mila tapahina haingana dia haingana ny fifandraisana amin'i Frantsa sy Napoléon III. Babony hatramin'ny fon'ny praiminisitra Rainivoninahitriniony.
Ny 11 mey 1863 dia nisy nahazo baiko tamin'ny praiminisitra namono an'i Radama II.
Rabodo vadiny no voatendry ho Mpanjakavavin' Madagasikara nandimby azy, nitondra ny anarana Rasoaherina.
12-Rasoherina (1863->1868) Raha nanome fahalalahana tanteraka teo amin'ny varotra, ny indostria ary ny finoana isan-karazany i Radama II tamin'ny androny, ireo nandimby ny asany kosa dia nanararaotra namoaka karazan-dalàna tamin'ny anaran'ny Mpanjakavavy, ka anisan'izany ny famerenana ny famelohana ho faty, saingy ny Mpanolotsaina ambony eo amin'ny firenena ihany no mahazo mampihatra izany, ary voaantoka ny fahalalahana ara-pinoana.
Tsy te-hiverina intsony amin'ny hasiahana sy habibiana nanjaka tamin'ny andron'i Ranavalona I ny fitondrana vaovao, saingy tsy nekeny kosa ny fifandraharana tamin'i Frantsa izay nosoniavin'i Radama II.
Ny Mpanjakavavy, izay notokanana ho mpanjaka tamin'ny 30 aogositra 1863, dia nitondra ny anaram-boninahitra mpanjakavavy fotsiny, fa ny tena nandidy teo amin'ny fitondrana dia ny Praiminisitra Rainivoninahitriniony. Raha nivadika ho protestanta ny Praiminisitra dia somary nanomboka nandrara ny finoana katolika izy. Kanefa na dia natahotra ity lehilahy tsy refesi-mandidy aza i Rasoaherina, dia vitany ihany ny nanolo azy tamin'ny zandriny manaraka azy, Rainilaiarivony, tamin'ny 14 jolay 1864.
13-Ranavalona II (1868->1883) Ramoma, zanak'olona mpiray tam-po amin'ny Mpanjakavavy Rasoaherina, no nandray ny fiandrianana tamin'ny anarana Ranavalona II ny 3 septambra 1868.Namoaka ny didy momba ny fandrimpahalemana. Ary namerina ny fivavahana Kristianina
14- Ranavalona III (1883->1896) Mpanjaka farany teto Madagasikara ary nalefa sesitany tany Algeria
Ny Fanjanahan-tany (1896 - 1960)[hanova | hanova ny fango]
Vanim-potoana nidiran'ny frantsay tao Madagasikara, fotoana nanamarika ny fidirany tao amin'ny taon-jato faha 20. Azo lazaina hoe nitondra fandrosoana sy fivoaram-piainana ihany teo anivon'ny andavan'androny ihany raha ny fivoarana teo amin'izao tontolo izao no jerena. Saingy teo lafiny politika izay novolavolain'ny fanjanahantany ho tsy afaka hijoro sy hahaleotena no mandrafitra ny tantarany ka niteraka ny fivakisan'ny firaisankina izay fototry ny mahanosy azy
Taorian'ny faharavan'ny Fitondran'ny Repoblika Voalohany dia nisy ny Tetezamita izay fotoana noheverina handinihan-tena teo amin'ny Tantaran'i Madagasikara. Ny Jeneraly Ramanantsoa no nisahana ny andraikitra feno teo saingy noho ireo tarazo nisy vokatry ny teritery tamina sokajin-javatra maromaro teto anatiny sy tany ivelany dia voatery nametra-pialana ny lehilahy ka namindra ny fahefana teo aminy. Ny Kolonely Ratsimandrava no nandray izany tamin-kafanam-po tokoa ; ary mbola tsy afaka ao am-pon'ny Malagasy niaina izany fotoana izany ilay fehezan-teny malaza hoe:"Tsy hiamboho adidy aho mon Général!".
Pejy iray teo amin'ny tantaran'i Madagasikara io, ary noheverina fa teboka hiaingana hiatrehana ny fandrosoana eran-tany. Teo vao nihevitra fa ho afaka tanteraka ny vanim-potoanan'ny Fanjanahantany. Herinandro ihany anefa ny faharetan'izany satria maty voatifitra ny kolonely Ratsimandrava ny 11 febroary 1975. Dia nisy Tetezamita indray teo fa tsy naharitra an-taona fa am-bolana ihany. Ny Capitaine de frégate Ratsiraka Didier no voatendry hitondra an'i Madagasikara taty amin'ny faran'ny taona 1975. Niezaka ny hitondra hevi-baovao sy fijery vaovao tamin'ny alalan'ny fandaharan'asa iray dia ny Boky Mena ity manamboninahitra Tantsambo ity ary naharesy lahatra ny maro tamin'ny Malagasy izy tamin'izany.
I Zafy Albert no nitazona ny andrikitra teo amin'ilay andrim-panjakana (H.A.E) lehibe natao hampijoroana ny Repoblika fahatelo. Narafitra ny lalam-panorenana vaovao, natao daholo izay rehetra hita fa madinana tokony ho tetenina tamin'ny lasa. Ny taona 1993 vao tafajoro tanteraka ny repoblika fahatelo, lany ho filoham-pirenena tamin'izany i Albert Zafy izay nanankinan'ny ankamaroan'ny malagasy ny safidiny. Sahirana teo amin'ny fitadiavam-bahaolana ara-toekarena ireo mpitondra ka niteraka fifanoheran-kevitra teo amin'ireo samy mpiaramitolona izany, ka ny taona 1996 dia voatery naato tamin'ny asany maha filoham-pirenena azy i Zafy Albert, io dia ny lalampanorenana ihany no nahafahana nampiato azy ary sambany teo amin'ny Tantaran'i Madagasikara no nisy fanonganam-panjakana tao anatin'ny fanajana ny lalàna tanteraka. Dia nitsangana ny tetezamita notarihin'i Ratsirahonana Norbert izay filohan'ny Fitsarana Avo Momba ny Lalàm-panorenana tamin'izany. Dia nikarakara ny fifidianana izay ho filoham-pirenena hasolo an'i Zafy izy. Nirotsaka hofidina indray teo Ratsiraka ka niverina nifaninana indray izy sy Zafy. Tafaverina ho filoha indray Ratsiraka ny taona 1997 ary nanitsy ny Lalàm-panorenana ka ny mahaolona sy ny tontolo iainana indray no nentiny handresena lahatra ny malagasy.
Voamariky ny firongatry ny andiam-balala ny taom-pambolena ary zary lasa niteraka famoronana asa vaovao ny famongorana ny andiam-balala sy ny atodiny. Ny zanaky ny filoha no nahazo izany tsena izany , saingy tsy dia nifanaraka loatra tamin'ny vokatra nandrasana no azo.Ny taona 1999 nisy ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna ka tamin'izany no nipoirana olona vaovao teo amin'ny sehatra politika. Anisan'ireny ny mpandraharaha tompon'ny orinasa Tiko, izay tsy fantatra fa ny vokatra vokarin'ny orinasany ihany no fantatra. I Ravalomanana Marc no nanana fahasahiana nijoro hitondra fijery vaovao. Mbola tanora sy tsy mbola heno teo amin'ny tontolo politika malagasy ity lehilahy ity ka nanaitra ny mponin'Antananarivo izay toerana nilatsahany ho fidina.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tantaran%27i_Madagasikara&oldid=775023"
Voaova farany tamin'ny 5 Martsa 2016 amin'ny 06:36 ity pejy ity